डाईट टिप्स जसले नयाँ आमाहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछ फिटर पोष्ट गर्भावस्था - Gynaec
डाईट टिप्स जसले नयाँ आमाहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछ फिटर पोष्ट गर्भावस्था
बच्चा जन्माउनु एक महिलाको लागि सब भन्दा सुन्दर अनुभव हो। सबै पीडा र कष्टहरू बिर्सिइन्छ तपाईंले पहिलो पटक आफ्नो बच्चालाई समात्नुहुँदा। त्यो सानो हँसिलो अनुहार र ती साना हातहरूले तपाईंको हृदयलाई यति खुशी र खुशीले भर्दछ कि सबै कुराले फरक पार्दैन। तर जब आमाहरू आफ्ना बच्चाहरूको हेरचाह गर्न व्यस्त हुन्छन्, तिनीहरू प्रायः आफैंलाई बिर्सन्छन्। नयाँ तालिकामा छाँटकाँट गर्नु र बच्चाको हेरचाह गर्नु थकाइलाग्दो हुन सक्छ र स्वस्थ शरीरले मात्र यी सबै गर्न सक्छ।
किन नयाँ आमाहरूलाई आहार योजना चाहिन्छ?
गर्भावस्था पछि डाईट पछ्याउनु भनेको अतिरिक्त तौल गुमाउने मात्र हो तर फिटर पाउने बारेमा मात्र होइन। प्रायः नयाँ आमाहरू उपचार र डेलिभरीबाट पुन: प्राप्तिमा ध्यान दिन आवश्यक छ। तिनीहरू मध्ये धेरै पोस्टपर्टम डिप्रेसनबाट ग्रस्त हुन्छन् जुन परिवारले प्राय: बेवास्ता गर्दछ। यसका अतिरिक्त, स्तनपान पनि पहिलो पटक आमाहरूका लागि नयाँ क्षेत्र हो। हाम्रो खाना योजनाहरूले नयाँ आमाहरूलाई यी सबै मुद्दाहरूको बीचमा लड्न मद्दत गर्दछ र उनीहरूको मातृत्वको आनन्द लिन्छन्।
अधिकांश आमाहरूले आहार योजनाहरूको विकल्प रोज्दछन् किनकि उनीहरू आफ्नो हालको तालिकामा बढी सक्रिय बन्न चाहन्छन्। सबै पोस्ट-पार्टम तौल तिनीहरूलाई सुस्त र निष्क्रिय बनाउँछ। हामी नयाँ आमाहरूका लागि आहार योजनाहरू प्रस्ताव गर्दछौं जुन तिनीहरूको पोषणलाई पुनः भरिपूर्ण पार्ने र तिनीहरूलाई सक्रिय र स्वस्थ बनाउनको उद्देश्य हो। आमाहरू खानासँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ र आफुमा राम्रो महसुस गर्नु पर्छ।
गर्भावस्था तौल वा 'बच्चाको वजन' भनेको बच्चाको वजन, गर्भाशयको विस्तार, प्लेसेंटा, स्तनको ऊतकहरू, अम्नीओटिक फ्ल्युड, र अतिरिक्त फ्याट स्टोरहरू जुन बर्चि and र स्तनपानको लागि आरक्षित छन्। अधिकांश महिलाहरूले गर्भावस्थामा सिफारिश गरिएको तौल भन्दा बढि प्राप्त गर्दछन् तर त्यो पोस्ट-डेलिभरीमा कार्य गर्न सकिन्छ।
सुरू गर्नका लागि, तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन यदि तपाईं गर्भावस्था पछि धेरै वजन घटाउन सक्षम हुनु भएको छैन भने। सबैजना फरक छन् र फरक तरिकाले कार्य गर्दछ। गर्भावस्था पछि महिलाका लागि डाइट योजना बनाउनु अघि, आमाले स्तनपान गराइरहेको छ कि छैन भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ।
आमाहरूलाई कम्तीमा छ महिनासम्म स्तनपान गर्नु पर्छ!
यदि तपाईं स्तनपानको लागि छनौट गर्नुहुन्छ, तब कम्तिमा पहिलो बच्चालाई बच्चा जन्माउने पछाडि छ महिनासम्म खुवाउनुहोस् किनभने स्तनको दूध बच्चाको लागि स्वस्थ र पौष्टिक हुन्छ। यो सजिलै पचाउन सकिन्छ र बच्चामा सँधै पहुँचयोग्य हुन्छ। स्तनपान गराएका बच्चाहरूलाई निमोनिया, पखाला, संक्रमण, एलर्जी, मधुमेह, र आन्द्रा जस्ता रोगहरू कम कम सम्भावना हुन्छ।
तर जब आमाहरूलाई स्तनपान गराइन्छ, उनीहरूको खानामा पर्याप्त पौष्टिक आहार हुनु आवश्यक छ किनभने बच्चाले पनि आफ्नो अंश आमाबाट खान्छ।
र यदि तपाईं आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गर्नुहुन्न भने, तपाईंलाई अझै पनि हेरचाह र स्वास्थ्यको समान मात्रा चाहिन्छ थप वजन कम गर्न र अधिक सक्रिय हुन। बच्चा जन्माउनु आमाबाट धेरै कुरा लिन्छ, र ऊ आफैंले फिर्ता हुनै पर्छ र उनको शरीरको पनि राम्रो देखभाल गर्नुपर्छ।
नयाँ आमाहरूका लागि स्वस्थ DIY रेसिपीहरू
यहाँ केहि राम्रा सजिलो DIY रेसिपीहरू छन् जुन नयाँ आमाहरूले आफैंले बनाउने प्रयास गर्न सक्दछन् र बच्चाको देखभाल गर्न वरिपरि चल्ने सबै उर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्।
ब्रेकफास्ट दिनको सबैभन्दा आवश्यक खाना हो किनभने यसले तपाईंलाई सक्रिय र सक्रिय रहन ऊर्जा दिन्छ। यहाँ दालचीनी एप्पल क्विनोआ बाउल को एक सरल र स्वादिष्ट नुस्खा हो जुन उच्च पोषण मूल्य र स्वादको साथ पनि आउँदछ। यसमा क्यानरी बिना पञ्जिरीको सबै ईश्वरत्व छ। यो ग्लूटेन-रहित छ र प्रसवोत्तर उपचार र तौल घटाउनको लागि उत्तम हो।
½ कप पकाइएको क्विनोआ
१ मध्यम स्याउ
१ चम्मच नारियल क्रीम
२ चम्मच भुने बदाम
२ चम्मच दालचिनी
½ चम्मच किशमिश
१. कचौरामा क्विनोआ थप्नुहोस् र यसमा नरिवल क्रीम खन्याउनुहोस्
२ काटिएको स्याउ, बदाम, किसमिस र दालचिनी त्यसमा छर्कनुहोस्
Just. मात्रै पछाडि बस्नुहोस् र खुशीको प्यालको स्वाद लिनुहोस्
२. दिउँसोको खाजा
दिनको दोस्रो खाना तपाईंको खाजा हो। सामान्यतया, हामी यस खानाको लागि दाल र रोटिस खान्छौं तर हामी तपाईंलाई केही चीज zhush गर्न चाहन्छौं। हामी तपाइँलाई एक स्वादिष्ट पलक पनीर वा चिकन नुस्खा दिइरहेका छौं जुन तपाइँलाई तपाइँको खानाको बारेमा धेरै राम्रो महसुस गराउँदछ। योजनामा ​​यो डिश थप्नुको पछाडिको विचार भनेको तपाईंको डाइटमा फलाम र प्रोटीन थप्नु हो, दुबैलाई गर्भाशयको अस्तर मर्मत गर्न आवश्यक छ।
१/3 कप कुखुरा वा पासेदार पनीर
१ चम्चा प्याज
Cup कप पालक पातहरू (१००-१२० ग्राम)
१-इन्च कीमा बनाइएको लसुन
२ मिन्स्ड लसुनको लौंगहरू
Green हरियो खोर्सानी
१/4 चम्मच जीरा, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, र धनिया पाउडर
१/8 चम्मच गरम मसला
नुन स्वादको लागि
१. पालक पातहरू राम्रोसँग धुनुहोस् र पखाल्नुहोस् र प्यानमा तेलको केही थोपा पानीले सासन गर्नुहोस्। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं केहि काजू थप्न सक्नुहुन्छ।
२. एकचोटि माटेपछि, यसलाई चिसो राख्न छोड्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई एक जारमा १ / 1 कप कप पानीमा मिलाउनुहोस्।
Now. अब एक प्यानमा, तेल, जीराको दाग, कीमाएको लसुन, प्याज, हरियो खोर्सानी, विज्ञापन लसुनको लौंगहरू थप्नुहोस्।
Once। एकपटक प्याज सुनौलो खैरो बन्छ, प्यान मा पालक पेस्ट जोड्नुहोस् र राम्रो पकाउनुहोस्।
Few. केही मिनेट पछि करीमा तपाईंको पासेदार पनीर वा कुखुरा थप्नुहोस् र यसलाई राम्रो मिक्स दिनुहोस्।
You. तपाई यसलाई रोटीस वा ग्लुटन रहित चामलको साथ सेवा गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी सबै खाजा बीचमा ती नाश्ताहरू तृष्णा गर्छौं र हामी सबै स्नैक्सिंगको दोषी छैनौं? तर किनभने हामीले अनिकाल बिना वजन घटाउने लक्ष्य राखेका छौं, हामी यस फ्रोथी र हेल्दी स्मूदीको साथ आएका छौं। यो स्मूदी यति भरिएको छ कि तपाईं ती अस्वस्थ फ्राइड चिप्सलाई सदाको लागि बिर्सनुहुन्न। यो अत्यावश्यक भिटामिन र फलामका साथ सुपरफूडहरू जस्तै अदुवा र सूर्यफूलको बीउले भरिन्छ।
काला, पालक, सलाद, र अजवाइन सहित g० ग्राम पत्तेदार तरकारीहरू
G० ग्राम मूल तरकारीहरू जस्तै बीटरूट, गाजर, शलगम, मूली, मीठा आलु
अदुवा, दालचिनी, कागती, तुलसी, र स्वाद अनुसार मिति
१ml० मिलिमिटर चिसो वा हिउँ परेको पानी
१. तपाईंको सबै पातदार तरकारीहरू मिसाउनुहोस्, चिसो पानीमा मूल तरकारीहरू मिठो पेस्ट बनाउनुहोस्
२. अदुवा, दालचीनी, निम्बू, तुलसी, र मिति को सानो भागहरु आफ्नो मनपर्ने अनुसार थप्नुहोस्
Your. तपाईको मनपर्दो गिलासमा मिश्रण राख्नुहोस्, केहि नट छर्कनुहोस् वा स्प्रिles्कल थप गर्नुहोस् यसलाई सुन्दर बनाउनुहोस्, र पिउनुहोस्!
Din. बेलुकाको खाना
दिनको अन्तिम खाना भएकोले बेलुकाको खाना पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तपाईंको खानामा फाइबर र प्रोटीन हुनु पर्छ जसले पचाउन सजिलो पार्दछ। हामी तपाईंलाई अमरन्थ ट्याबौलेहको नुस्खा दिदैछौं जुन फाइबर, जटिल कार्बोहाइड्रेट, र स्वस्थ वसायुक्त हुन्छ। यसमा उच्च मात्रामा एन्टिआक्सीडन्टहरू पनि छन्। यो एक भरिने भोजन हो कि सुपर स्वादिष्ट र स्वस्थ पनि छ।
१ कप पकाइएको आमरन्थ
T चम्मच उमालेको ब्रोकोली
T चम्मच टमाटर र प्याज
२ चम्मच कटेको धनिया
१ चम्चा जैतून
१ चम्मच jalapeno
ड्रेसिंग को लागी
१ चम्मच नीबूको जुस
१ चम्मच जैतुनको तेल
१. आमरन्थलाई पानीमा उमालेर प्यानमा छोप्नुहोस्, यसलाई लगभग २० मिनेटसम्म, वा सबै पानी अवशोषित नभएसम्म राख्न दिनुहोस्।
२ सबै ताजा तरकारीहरू एक कचौरामा मिलाउनुहोस् जब राजकुमार पकाउँदै छ।
Your. तपाईको आमरन्थलाई चिसो पानीमा वर्षा गर्नुहोस् र यसलाई भाँडाको भाँडामा हाल्नु अघि राम्रोसँग चलाउनुहोस्
The. ड्रेसिंगका लागि स्वादका लागि जैतुनको तेल, निम्बूको रस, नुन र मरिच जोड्नुहोस्।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यी रेसिपीहरू बनाउनको लागि अत्यन्तै सजिलो र स्वादको लागि उत्तम हुन्छ। मलाई थाहा छ कि नयाँ आमा हुनु भारी हुन सक्छ, तर तपाईंले आफ्नो लागि समय खोज्नु पर्छ। तपाईंको शरीरलाई यसलाई सक्रिय र स्वस्थ राख्न पोषण चाहिन्छ। त्यसोभए, समय निकाल्नुहोस् र दिनभरि खानुहुने हरेक भोजनको आनन्द लिनुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: आमा बन्ने मतलब यो होइन तपाईको महत्वाकांक्षालाई टाढा जानु पर्छः सोहा अली खान
कसरी हामी कपाल झर्ने नियन्त्रण गर्छौं
कसरी घरमा अनुहारको कपाल स्थायी रूपमा प्राकृतिक रूप बाट हटाउने
अनुहार मा पकाउने सोडा को प्रभाव
छाला गोरो बनाउनको लागि कसरी बेकिंग सोडा प्रयोग गर्ने
भिजेको बदाम खाने को उपयोग गर्दछ